Dhiibbaa Ummata Oromoo Irrati Biyya Kessaafi Alaan Taasifamaa jiru - Caboowanci.com-Oromia
Dhiibbaa Ummata Oromoo Irrati Biyya Kessaafi Alaan Taasifamaa jiru
August 16, 2017 Nadhani	0 Comments #OromoProtes, OLF, OMN, OromiaTV
Dhiibbaa Ummata Oromoo Irrati Biyya Kessaafi
Alaan Taasifamaa jiru kanaafi Furmaanni isaa maal?
Akkuma beekamuu baroonni dhibbaa darban ummata Oromootiif dhumaati hammana hin jedhamnee fi dararaa cimaa dabarisaa kan ture yoo ta’u, hardhas itti cimuudhaan dhumaa jiraachuun isaa beekamadhaa. Motummoonni Ethiopia bulichaa turaniif yeroo ammaa bulichaa jiran ilmaan Oromoo xiqqaafi Gudda otuu hin jenne duguuggaa sanyii irrati taasisaa jiru.Ummata Oromoo biyya ofi irrati, lafaa isaa irrati akka lammii lamuu ilaalamuun qabeenyaa isa saamamuun
enyuummaa isaa dhabisiisuun akkasumas Oromoo ta’ee dhalachuu isaaf qofaaf biyyaaf biyyee isaa irrati jaarraa tokko olif dhiiginni isaa dhangala’aa, dubartiin harma muramaa, daa’imman lammii boru ta’an duguuggaan
seenan hin dagannee irrati gaggeefamaa jira.
Kan irraa hafan maaf nusaamtu waan jedhan qofaaf, yakkamaa ta’anii beektonni keenya, akkasumas barattoonni keenya manneen hadhaa addaa addaa keessatti dararamaa jiraatu. Yeroo amma yeroo adunyaa hunda keessati lubbuun ilima nama tokko akka gatii olaannaati ilaalamuu kanati lubbuun ilmaan Oromoo guyyaa irra wareegamuun dhumaatin ammana hin jedhaminne irrati raawwatamaa Jira. Qeerroon Oromo saamichaa lafa abbaa isaa, duguugaa sanyii isaa akkasumas aadaafi seena isaa mormuuf karaa nagaan sagalee isa dhaggeefachuuf karaati bahee rasaasa mootumma nama nyaata Wayyaaneetin akka qalamaaf dabtara isa qabateen dhiigni isa dhangala’uun karaa irrati hafaa jira.
Motumman Wayyanee karaallee isaaf mijate hundati fayyadamuun qabissoo ummata Oromoo ukkaamisuufi saba kana duguuguun lammis dhabinne lafas dhabinne akka ummata Kurdish saba biyya hin qabinne nu taasisuuf alkaniif guyyaa boqonnaa tokko malee hojjachaa jira. Kaneen keessa inni gurgurdoon:
Lammii saboonumma qabu kan sabaaf dubatu karaa kamiinuu haa
ta’uu adunyaa kana irra balleessu.
2. maqaa Inivestimentiitiin Ummata Oromoo lafa irraa buqisuun saba isaatiif
qooduuf qabeenyaa Oromootin biyyaa Awuroopaa adda addaa irraa
3. Saboota ollaa Oromoo ta’an hundaa itti bobaasuun lafa Oromo
saamisuun saba keenya lafa isaa irraa buqisuudhaan biyya isaa dhabisiisuu.
4. Karaalee adda addaatiin tokummaa saba kanaa facaasuuf burjaajesuun akka waligaliteen mirga isaaf hin falimmanne Taasisuu irrati alkaniif guyyaa hojjachuudha.
Namoota isa Social media adda addaa irrati bobaasuun hojii saba sana tokkommaa isaa facaasu irrati mindeessee gadi lakkisee jira.Ummanni Oromoo shira isa irrati xaxamu kana beekee jijiiruuf lammii damaqee lafaa isaa saamamuu aaddaa isaa baduufi biyya isaa fudhatamaa jiru dura dhaabachuun mormatuu kan Gandaan lagaan akkasumas Amanitaan walitti dhufuun osoo hin taanee Oromumma qofa gaadissa godhatee biyya isaaf falmachuun
dirqama fillanno hin qabinneedha. Nuti baqanoonni biyya alaa jiru maal yoo goonee qabissoo Ummata Oromoo cinaa dhaabachuu akkasumas mirga baqataa Oromoo kabachisuu dandeenya kan jedhuuf qabixiilee furmaataa qaban asii gadii kaa’uun ni danda’ama.
1. Bakka jiru hundaati tokkummaa irrati hojachuun Ummata faca’ee jiru kana qabisooti fiduu
2. Firootan Oromoo Umuu irrati balidhinaan hojachuu
3. Hojii hojjanuu hunda keessati gogogora darbee faarisuu osoo hin taanee isa darbee irraa barachuun firii of duraa bu’ura godhachuun hojjachuu.
4. Qoqodaminissa ilaalichaa adda addaa Bu’urreefatee kaneen akka Amanitaan walqoqooduun, Siyaasan walqooduun fi naanoon walqooduun ofi keessan balleesuun hafuura qulquluun ummata keenyaa gidduutti umuufi kkf hundaa hojachuun nu irra jiraata.
← የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ብሄራዊ ውርደት መውጣት አለበት!
Germany Foreign Policy on Africa specially on Ethiopia →